OMA: Zvemukati Kushambadzira uye Traffic Generation Platform | Martech Zone
OMA: Zvemukati Kushambadzira uye Traffic Generation Platform
Chitatu, Nyamavhuvhu 28, 2013 Chipiri, August 27, 2013 Douglas Karr
Organic Kushambadzira Ongororo (OMA) iri Yemukati Kushambadzira uye Traffic Generation chikuva chevashandi vevashambadzi. Izvo zvinoshandiswa zvinobatsira vatengesi vezvinhu kutama kubva ku "gut instinct" kuenda ku "data driven" kuita sarudzo pavanotora marwadzo kunze kwekuita zvemukati kushambadzira.
OMA inokubatsira kuti unzwisise vateereri vako zvirinani, inorerutsa kutsikisa zvirimo uye nekugadzirisa zvemukati kuti zviitike kusvika. Uye, OMA inogadzirisa kutsvaga nekubata masosi ane simba nevanhu mukati mekutsvaga, zvemagariro, mablog, nzvimbo dzenhau, maforamu uye nzvimbo dzeQ & A.
Chaizvoizvo, OMA inoita kuti zvive nyore kuzadzisa zvirimo zvekushambadzira zvinangwa - kudzidzisa vatengi vako uye nekuvatyaira kuti vashanyire webhusaiti yako. Saka, iwe unogona kutyaira yakawanda traffic uye kuburitsa yakaoma ROI yako kuyedza… zvese munguva shoma nguva.
Tsvaga Engine Optimization
Domain Ranking Kutevera
Makiyi Akakosha eOMA
Keyword Research - OMA's kiyi yekutsvagisa kugona inopa nzira dzinoverengeka dzekuwana iwo akakosha mazwi ekuti utarise kune yako projekiti. Kunze kwekutanga keyword ongororo, OMA yakasarudzika migodhi yako zvemukati uye nhaurirano mumusika kuti ugare uchifumura mamwe mazwi ezwi akakosha.
Anokwikwidza Kutsvagisa - Zvinenge zvese chidimbu cheruzivo muchikuva chinowanikwa kune yako saiti uye kuedza kunoteverwa kune vakwikwidzi zvakare. Izvi zvinokupa iwe kuenzaniswa kusingaenzaniswi mune zviri kuitwa nemakwikwi ako. Kubva pasocial kusvika backlinks, tsvagurudzo kumashambadziro ekushambadzira uye kushandisa, OMA inokubatsira iwe kuona kuti vakwikwidzi vari kuwana sei mhedzisiro uye zvinokubatsira iwe kuenzanisa / kuvarova.
Tsvaga Engine Optimization - Yakavakirwa muOTA ndiwo mabhizinesi ekirasi SEO maturusi. Kubva kuSaiti optimization, kune backlink ongororo, kune chinzvimbo chekutevera uye peji nyaya manejimendi uye yekutevera, OMA inokupa zvese zvaunoda kuti zvemukati zvemukati zvisvike zvakanyanya.
Kuteerera Kwemagariro - OMA inoongorora makiyi ese akakosha uye masocial network, kunyangwe mablog, maforamu uye nzvimbo dzenhau dzemazwi ezvinotaurwa. OMA inowana mahedhtag akataurwa pamusoro pamazwi ako. Uye, nekutarisa mazwi akakosha tinogona kuona kuti ndiani ari kutaura zvakanyanya uye ndiani ari kutaurwa nezvake zvakanyanya. Pakutaurwa kwega kwega isu tinoona kana iri mukati meakanaka / asina kunaka / asina kwaakarerekera mamiriro.
Kufuridzira Kutsvagisa - OMA inozivisa uye inonongedza zvirevo vachishandisa makumi maviri nematanhatu metric kuti vawane vane mukurumbira vevanokurudzira mune yega yega niche. Vese vanopesvedzera vanozvimirirwa neakakosha uye neboka remazwi ekutsvagisa zviri nyore. Kune mumwe nemumwe anotungamira tinowana ruzivo rwekuonana kubva kune yavo saiti uye zvimwe zviwanikwa pamhepo.
Outreach Management - Isu tinobatana nevakajairika vanopa email kuitira kuti yako iwe uone tsamba dzako dzese munzvimbo imwechete. Gadzira maemail templates mune imwe nzvimbo. CRM maitiro manejimendi. Yakagovaniswa dhatabhesi dhata revashandisi vese mukati mega projekiti.
Project & Task Management - mukati meimwe account iwe unogona kugadzira akawanda mapurojekiti akasiyana masosi, chigadzirwa / masevhisi kana mishandirapamwe. Gadzira uye ipa mabasa mukati mechirongwa kune vamwe vashandisi. Govera mvumo yekuona kupatsanuka pazvinenge zvichidiwa
Mitengo yakakwikwidza. Nekuti Hubspot vashandisi vavanopa mukana weOPA kwe $ 249 / mwedzi Ivo zvakare vanopa tsika zvirongwa zveasina-purofiti uye zvimwe zvinoenderana nezvakanyanya kudikanwa.
Tags: AnalyticsAnokwikwidza KutsvagisaKufuridzira Kutsvagisakeyword researchOrganic Kushambadzira OngororoOutreach Managementproject managementSearch Engine Optimizationseokutarisana nevanhubasa manejimendi
Iyo CMO Ongororo - Nyamavhuvhu 2013
Aug 28, 2013 pa 10: 13 AM
Wongorora iwe zvemagariro zvinobuda, asi usakanganwe zvako SEO kuedza. Iwe haugone kukanganwa kana, tsvaga chiyero.